Tafika Eswatini miadidy raha ny SADC kosa dia mety ho fitaka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Eswatini Breaking News » Tafika Eswatini miadidy raha ny SADC kosa dia mety ho fitaka
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Lohateny amin'ny Times of Swaziland tamin'ny 4 Jolay nilaza fa mifehy ny Tafika
Ny tafika Eswatini dia mety nanjakazaka ary azo inoana fa nampiato ny fihetsiketsehana rehetra, ary koa ireo izay manana fitarainana am-pilaminana. Milamina ny raharaha ankehitriny, saingy toa nakatona ny alatsinainy maraina ny Internet.
Araka ny eTurboNews loharanom-baovao dia nilamina ny toe-draharaha ao amin'ny Fanjakan'i Eswatini, raha ny Internet kosa mikatso matetika.
Raha ny filazan'ny Government friendly Times of Swaziland dia miadidy ny fanjakana ny tafika amin'izao fotoana izao.
Tonga tao Eswatini ny minisitry ny SADC ary nanao dinika tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Vondron'orinasa sy ny fiarahamonim-pirenena ny alahady, ny sasany mahita azy io ho toy ny sarona na hosoka.
Nilaza ny tompon'andraikitra ambony amin'ny governemanta eTurboNews:
Mamitaka ireo mpikomy satria tonga manao akanjo fanamiana miady amin'ny tafika izy ireo. Ny fandringanana dia lehibe tokoa ary efa ho 30 ny maty, indrindra ireo mpandroba izay nirotaka nitety trano fivarotana. Tsy maintsy niaro tena ny tompona fivarotana sasany.
Raha mihidy ao amin'ny fanjakan'ny Eswatini ny ankamaroan'ny Internet, ny Force Defense Umbutfo Eswatini (UEDF) dia nampandre ny firenena Eswatini fa ho fahitana mibaribary eraky ny firenena manoloana ny korontana misy ankehitriny, fanafihana fandoroana trano tsy miankina sy fanjakana, fandrobana am-pivarotana, fanorisorenana ary famonoana olon-tsotra tsy manan-tsiny.
Ny Force Defense Umbutfo Eswatini dia tafika ofisialy mitam-piadiana ao amin'ny Fanjakana Afrikana Tatsimo any Eswatini. ampiasaina indrindra mandritra ny hetsi-panoherana ao an-trano, miaraka amina sisin-tany sy adidy sasany; ny hery dia tsy mbola niditra anaty ady tany ivelany.
Ny Times of Swaziland dia navoaka tamin'ny Alahady: Ny Mpanjaka Andrianjaka dia komandin'ny UEDF. Ny fahitana voalohany ny tafika nalefa teny amin'ny araben'ilay firenena dia ny talata lasa teo taorian'ny nandehanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ary nandoro ny fananany, anisan'izany ny tranobe sy ny kamio mpitatitra entam-barotra isan-karazany.
Io fanatrehana io dia nampitomboina hatrany amin'ny tanànan'ny tanàna aza, izay toerana fandrobana fivarotana sy fikatsoan'ny làlana mampiasa vato, hazo ary fitoeram-pako no namboarina. Omaly, lietnà Tengetile Khumalo, mpiandraikitra ny fifandraisana amin'ny daholobe UEDF, tamin'ny baikon'ny komandin'ny jeneraly Jeffrey Tshabalala, dia nilaza fa "ny hery fiarovana dia naka ny toe-javatra mampalahelo '.
Nilaza izy fa fanatanterahana ny baikon'ny tafika, ankoatry ny zavatra hafa, dia ny 'fanampiana ny manampahefana sivily hitandrina ny filaminana sy ny filaminana mandritra ny toe-javatra misavoritaka toa izao.
"Faly ny UEDF mizara amin'ireo emaSwati rehetra fa hatramin'ny nisakanana ny toe-javatra dia tafaverina amin'ny laoniny ny fandriam-pahalemana. Ny hery fiarovana dia niaro soa aman-tsara ny ainy sy ny fananana maro, izay teo an-tsisin'ny fandringanana nataon'ireo mpandoro tena izay nilaza azy ho 'mpanao fihetsiketsehana', ”hoy i Khumalo. Nasongadiny fa ny UEDF dia hanohy hanao ny asany lehibe hiarovana ny ainy sy ny fiandrianan'ny Fanjakan'i Eswatini. Nilaza izy fa hanao an'izany izy ireo 'na eo aza ny fampielezan-kevitra manaparitaka tanjona handotoana ny lazan'ilay orinasanay'.
Ny fanentanana fanosorana, hoy ny lietnà, dia nifototra tamin'ny fampahalalana azon'izy ireo antoka fa voarohirohy fa misy mpikomy avy any ivelany izay mandray anjara amin'ilay ady mitohy, izay nitifitra olona tsy manan-tsiny ary namindra ny tsiny tamin'ny miaramila. "Ny UEDF dia te hitandrina, ireo olona ireo mba hiala amin'ny fanafihana an-tsokosoko ataon'ireo sivily tsy manan-tsiny sy ny doro tanety, mba hialana amin'ny fanaovana fanamiana camouflage izay mitovy amin'ny antsika," hoy i Khumalo.
Nampita ny fangatahan'ny hery fiarovana ho an'ny firenena izy mba hiara-hiasa 'amin'ireo miaramila mazoto eto an-toerana ary hanaja ny curfew rehetra napetraky ny governemanta'. Nangataka tamin'ny ray aman-dreny i Khumalo mba hiantohana fa mijanona ao an-trano ny zanany mandra-pivoakan'ny raharaha manontolo.
“Raha ny marina, ny ray aman-dreny dia tokony hampitandrina ny zanany tsy hiditra amin'ireo 'mpanao fihetsiketsehana ireo”, hoy ny tafika PRO. Nilaza koa i Khumalo fa naniry mafy ny hiasa arak'asa araka izay tratra ny hery fiarovana, noho izany ny fiantsoana ny olona hiara-miasa. Nanampy izy hoe: “Ho an'ireo izay tsy manaiky ny fangatahanay dia hiatrika ny fahatezeran'ny tafikay izy ireo. Tsy tokony hikoropaka ny firenena. Eo ny hery fiarovana hanompo ny firenena. ” Ny fanambarana nataon'ny tafika fa efa azony ny arabe ao amin'ny firenena dia nitranga iray andro monja taorian'ny Ivotoerana misahana ny demokrasia sy ny fitarihana (IDEAL), izay fikambanana mikarama mitady tombom-barotra, nametraka fangatahana maika tany amin'ny Fitsarana Avo mitady fangatahana esory ny miaramila amin'ny arabe.